သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင်တဲ့ IM Chat ကိုထားရန်ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့ Website တွင်တဲ့ IM Chat ကို Widgets ထားပါလုပ်နည်း
ဘလော့များ, ကိုယ်ပိုင်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် Chat ကိုအတူ interactive Create
ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် website တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်သူမည်သူမဆိုအဘို့, အစိုင်အခဲဧည့်သည်အခြေစိုက်စခန်းတည်ဆောက်ခြင်းဖို့အရေးအပါဆုံးသော့တဦးသည်သင်၏ဧည့်သည်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖြစ်ပါတယ်။ Nielsen Netratings က 2007 ခုနှစ်လေ့လာမှုအရ, အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေသောက်ဘ်ဆိုက်တွင် Destinations နီးပါးတညီတညွတ်တည်းသူတို့ရဲ့ site ကိုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်မှထပ်ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ထားတဲ့ IM ပါဝင်သည်။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုပျမ်းမျှလူတစ်ဦးတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး site ပေါ်တွင် IM ရသနည်း? ဒါဟာသင်ထင်လိမ့်မယ်သကဲ့သို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်တဲ့ coding နဲ့သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာတစ်ခုအပြန်အလှန်ဒြပ်စင်ထားရန်အလိုဆန္ဒ၏အနည်းငယ်သောအသိပညာကဖြစ်ပျက်စေရန်လိုအပ်ကြောင်းအားလုံးပါပဲ။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သီးခြားထားတဲ့ IM Create
အစဉ်အဆက်သင်၏ကိုယ်ပိုင်တဲ့ IM Client ကို operating ၏အိပ်မက်မက်? သငျသညျ, လွန်း, တက်အများဆုံး developer များကဲ့သို့မြေပြင်ကနေသင့်ရဲ့ IM တည်ဆောက်ရန်မယ်လို့မလိုဘဲသုံးစွဲဖို့, သင်၏မိတ်ဆွေများအဘို့အ Co-အလုပ်သမားများ, စာဖတ်သူတွေသို့မဟုတ်ပြည့်စုံသူစိမ်းသင့်ကိုယ်ပိုင် client ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်! AjaxIM သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်ပြုပြင်နိုင်သည်အံ့သြဖွယ်အခမဲ့ client ကို script ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အစွမ်းထက်နည်းနည်းထားတဲ့ IM အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်စွယ်စုံအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
တစ်လိုင်း Widget ကိုသုံးပါ
တစ်ဦးရဲ့ IM ဝစ်ဂျက်ကိုအသုံးပြုသူများအသင့်ထုတ်ဖေါ်ရန်မလိုဘဲအသုံးပြုသူများသည်ကိုသင်ချက်ချင်းအမည်မသိ access ကိုပေးခြင်းဟာသူတို့ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသေးငယ်တဲ့သေတ္တာသို့မဟုတ်ဘား embed လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု screenname လူသိရှင်ကြား။
တစ်ဦးအပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံအတွက်, သင့်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တစ်ဦး Mini-chatroom ညာဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထားတဲ့ IM ၏တနျခိုးအသုံးချမှ Digsby က IM ဝစ်ဂျက်စမ်းပါ။ အဆိုပါ Digsby တစ်အကြိုက်ဆုံး multi-protocol IM clients များနှင့် widget ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်မိတ်ဆွေများနှင့်ပရိတ်သတ်များနဲ့ချိတ်ဆက် Digsby အသုံးပြုသူများကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု Digsby Widget လေးကိုရယူပါ။
Google Plus စုစည်းမှုများနှင့်အတူနောက်ထပ်နောက်လိုက်ရဖို့ရန်ကဘယ်လို
Badoo များအတွက် Register လုပ်နည်း
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ AirG Chat ကိုသုံးစွဲနည်းကိုဘယ်လို
AIM Mail ကိုသို့မဟုတ် AOL Mail ကိုတစ်ဦးကို Message Print လုပ်နည်း
AIM Mail ကိုသို့မဟုတ် AOL Mail ကိုအတွက်အီးမေးလ်ထိုးမြဲလက်မှတ်ဖန်တီးနည်း
Facebook က, Snapchat အပေါ်သင့်ရဲ့ Buddy List ကိုမှအဆက်အသွယ်များကို Add
IPhone အတွက် GROWLr အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
PS2 များအတွက် Tekken Tag ကိုပြိုင်ပွဲ cheat
DeLorme PN-40: မြန်နှုန်းနှင့် Maps ၏တစ်ပွညျ့
Backup ကို v1.0.4 ပြန်လုပ်ရန်
3D ပုံနှိပ်များအတွက် resins
Klipsch Dolby Atmos-enabled ကိုးကားစရာ Premiere Speakers
Gmail နဲ့ Facebook မှာ မှစ. Yahoo Mail မှသွင်းကုန်ဆက်သွယ်ရန်
Windows Live Mail ကိုပြဿနာများ Fix ဖို့ POP နဲ့ IMAP ကိုယာဉ်အသွားအလာ Log
ဘယ်လို Group မှကိုမက်ဆေ့ခ်ျမှ, Mac OS X ကိုမေးလ်ထဲမှာ Thread များက
လျှောက်လွှာ-Layer DDoS တိုက်ခိုက်မှုများကိုနားလည်ခြင်း
IPhone အတွက်ဆာဖာရီထဲမှာ Credit Card ကိုနံပါတ်စကင်ဖတ်လုပ်နည်း
Outlook နဲ့အတူတစ် AOL အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်
10 ဘလော့ပြိုင်ပွဲ Giveaway အကြံပြုချက်များ
Microsoft.directx.directsound.dll အမှား Fix ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးကို USB Flash ကို Drive ကို မှစ. တစ် Car တွင်ဂီတကိုနားထောင်ခြင်း
SQL အတွင်းပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အတူအကွိမျမြားစှာဇယား မှစ. ဒေတာများရယူခြင်း
အဆိုပါ Bat! 7.1 သည် Windows အီးမေးလ်အစီအစဉ်
သင်က Xbox One မှာတွင် Play နိုင်သလား, Xbox 360 ဂိမ်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏စာရင်း
Motorola Droid2သို့ပြန်သွားရန်ဖုံး Remove လုပ်နည်း
သင်က iTunes ကိုနှင့် iTunes Store ကအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သိလိုအရာအားလုံးကို